I-100+ ye-UK kunye ne-Ireland Exhibitors elungele ukonwabisa i-WTM yaseLondon ngo-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » I-100+ ye-UK kunye ne-Ireland Exhibitors elungele ukonwabisa i-WTM yaseLondon ngo-2021
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
IWTM yaseLondon ngo-2021
Bangaphezu kwe-100 ababonisi abavela e-UK nase-Ireland babhalisele i-WTM London ukuthungelana nabathengi borhwebo kunye namajelo eendaba avela kwihlabathi liphela. Ziquka iibhodi zabakhenkethi, abasebenzi, iihotele, iinkampani zolawulo lwendawo ekuyiwa kuyo, iinkampani zikaloliwe, iifemu zabaqeqeshi kunye nezinto ezinomtsalane.
Umboniso we-WTM waseLondon ka-2021 uya kuqhubeka e-ExCeL eLondon ngoMvulo, ngoNovemba 1, 2021, ukuya kutsho ngoLwesithathu, nge-3 kaNovemba ka-2021.
I-WTM Virtual iya kubanjwa ukusuka nge-8-9 kaNovemba, 2021.
Ukwenziwa lula kwemithetho yokuhamba kuthetha ukuba ngoku kulula kubathengi kunye nemithombo yeendaba evela kumazwe amaninzi kwihlabathi jikelele ukuba bazizimase ngokobuqu.
Ababonisi baya kujoyina amakhulu ababonisi abavela eYurophu nakumazwe akude njengaseMauritius, eIndiya, eThailand, ePeru nase-US.
IWTM yaseLondon's ngokomzimba show iya kwenzeka ExCeL London ngoMvulo, Novemba 1-Lwesithathu, Novemba 3, 2021, ukuze ilandelwe yi WTM Virtual (Novemba 8-9).
Ababonisi abaphambili base-UK nase-Ireland baquka uKhenketho lwase-Ireland kunye UKinbound, abaza kubamba abame-ndawo kwiindawo zabo zomboniso, ukuxhasa oogxa babo borhwebo.
Abatyeleli kwi-UKinbound stand e-UKI100 baya kuba nakho ukunxibelelana namalungu angama-28 ombutho, kubandakanya neempawu eziqhelekileyo ezifana Big Bus Tours kwaye IJurys Inn, kunye neebhodi zabakhenkethi ezivela kwiindawo njengoko zahluka njenge Bath & Bristol, Greenwich, Plymouth, Jersey, Kent and Liverpool – kunye nee-arhente zezokhenketho zesizwe ze Tyelela iWales, Ndwendwela iScotland kwaye UndwendweloBritani.
Okwangoku kwi I-Tourism Ireland Ukuma (UKI200) kuya kubakho i-75 yabathathi-nxaxheba abavela kwisiqithi sase-Ireland, kuquka namagama awaziwayo afana I-Titanic Belfast, i-Irish Ferries, iNdlu yobukhosi yaseMbali (iNqaba yaseHillborough kunye neGadi), iGuinness Storehouse kwaye Umdlalo weTrones Studio Tour.
Kuya kubakho iibrendi zehotele ezinje IQela leehotele eziKhethekileyo, iDalata, iDa Vincis Hotel, iiHotele zaseKillarney, iiHotele zase-Irish zase-Original kwaye Khetha Iihotele zaseIreland; iimyuziyam kunye nezinto ezinomtsalane ezifana I-EPIC IMyuziyam yase-Irish Immigration, Indlu yaseWaterford Crystal kwaye i Iziko leeNdwendwe leSkellig.
Ngeli xesha, abanye ababonisi kwi-UK & Ireland icandelo le IWTM yaseLondon iya kubandakanya nabaqhubi abanje Ukhenketho lwegolide kunye nenkampani yolawulo lwendawo IYurophu Engenayo kunye nomboneleli okhokelayo wezixhobo zesikhokelo somsindo kunye nezixhobo zedijithali kukhenketho kunye nenkcubeko, IQELA LEVOX.
Kwakhona kubonisa liBhunga leSithili saseDover, emele Ilizwe le-White Cliffs, equkayo Dial, Dover, Sandwich kunye neendawo ezingqongileyo.
Amanda Lumley, UMlawuli oLawulayo Apho uya khona ePlymouth uthe: “Sichulumancile ukubakho kwi-WTM kwaye siza kube sibonisa uphawu lwaseBritane lwe-Ocean City kunye nenkqubo yokuqala yase-UK yePaki yeSizwe yaseMarine. Ukwakha kwindalo esingqongileyo yaselwandle eyimbali kunye nelifa lemveli siya kubonisa indlela abatyeleli abanokusebenzisa ngayo ngokupheleleyo inzuzo yethu emangalisayo yasemanzini kunye nemisebenzi emininzi yasemanzini kunye namava.
"U-2022 uthembisa ukuba ngunyaka onika umdla kubakhenkethi kunye noMboniso wezobuGcisa waseBritane e'The Box', isithembiso esitsha 'se-immersive Dome', (ekuphela kwayo eYurophu) i-Elizabethan House ebuyiselweyo kunye nenkqubo epheleleyo yemisitho kunye nemisebenzi ebonelela ngayo yonke into. indawo yokufikela unyaka wonke.”
UJoss Croft, CEO, UKinbound uthe, “I-WTM yinxalenye ephambili yekhalenda yoshishino lokhenketho lwamazwe ngamazwe kwaye siyakuvuyela ukubuya kulo nyaka, siphinde sisingethe i-UK Pavilion. Sinengqokelela eqaqambileyo yamashishini okhenketho abonisa ecaleni kwethu, anomdla wokwamkela abakhenkethi abavela kumazwe ngamazwe. Ujoliso luya kuba se-UK kulo nyaka uzayo xa sisingethe iMidlalo yaseBirmingham, uKumkanikazi wePlatinam yeJubilee kunye nomnyhadala ongabhalwanga, kwaye i-WTM ibonelela ngeqonga elifanelekileyo lokubonisa ukuba i-UK ivulekile, ikhuselekile kwaye yamkelekile ngo-2022. "
USimon Press, UMlawuli we-WTM London & Travel Forward Exhibition uthe: “Sijonge kakhulu ukudibana noluhlu olubanzi lwababonisi abavela e-UK nase-Ireland, kunye namahlakani abo e-ExCeL.
“Ibingumngeni onje kwiinyanga ezili-19 phakathi kwesi sifo, uninzi lwamashishini okhenketho lwasekhaya luye lwangena ngakumbi kwiimarike zasekhaya - kodwa bayazi ukuba ukubuya kwabakhenkethi baphesheya kuya kubaluleka ukuze baphile. I-WTM yaseLondon iya kuba liqonga lokubuyisela kwakhona kumazwe ngamazwe njengoko sihlaziya ubudlelwane bezoshishino kunye nokwenza intsebenziswano entsha.
“Ukwenziwa lula kwemithetho yokuhamba kuthetha ukuba ngoku kulula kubathengi namajelo eendaba avela kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela ukuba bazimase ubuso ngobuso kwaye benze uninzi lwababonisi abahlukeneyo ukuba badibane buqu.
Ngapha koko, iipakethi zethu zomboniso zibonelela ngezona zibalaseleyo zehlabathi njengoko ababonisi baya kuba nendawo yokuma e-ExCeL London kunye nobukho behlabathi kwiveki elandelayo, ukuze baphinde bakhe unxibelelwano lobuso ngobuso kunye nabafowunelwa bangaphambili kwaye bavelise izikhokelo ezintsha ezivela ngeenxa zonke. Umhlaba."